Horonan-tsary: ​​Revolution Video Revolution 2.0 | Martech Zone
Tsy haiko ny momba anao, fa manomboka mahita aho be lavitra dokambarotra ao amin'ny Youtube. Rehefa lasa mora vidy sy misy vokany bebe kokoa ny horonan-tsary, dia toa tokony hampidirina ao daholo ny paikady marketing. Tena miavaka ny horonan-tsary satria mahatratra saika ny olona rehetra. Tsy ny rehetra no mamaky, fa ny rehetra mijery. Ary miaraka amin'ny Youtube napetraka amin'ny saika isaky ny sehatra mifandray, tsy misy fomba tsy hijerenao ireo horonantsary Youtube.
Ho an'ny mpivarotra, ny ny fiantraikan'ny doka amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'izany tsy mitsaha-mitombo… noho izany tsy mila mivoaka haka sary vetaveta ianao (na dia mbola hanome sosokevitra azy aza aho!). Toa nahavita asa lehibe ny indostria tamin'ny fampiharana tsimoramora ny dokambarotra horonantsary lava kokoa sy doka popover. Nijery dokam-barotra 2 minitra aho tamin'ny androny tamin'ny horonan-tsary iray! Matetika aho no mijery ilay fanisana "Skip this Ad", na izany aza.
Aza hadino ny maka ny tatitra momba ny fifamoivoizana Youtube avy amin'ny Reel Marketing Insider.
Tags: sary infographicvideo marketingYouTubestatistika youtube
Ampitomboy ny Youtube Views
Jan 12, 2013 ao amin'ny 12: 56 AM
Misaotra amin'ny fampahafantaranao.Tiako ny hizara momba ny serivisy media sosialy indrindra ho an'ny youtube. Tohizo ny asa tsara ao amin'ny bilaogy.